မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားပဋိပက (1) Apply မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားပဋိပက filter
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေအသုံးချမူဝါဒ (1) Apply မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေအသုံးချမူဝါဒ filter
Infograph (2) Apply Infograph filter
Paper (90) Apply Paper filter
Policy issue (1) Apply Policy issue filter
(-) Remove ခေါင်းစဉ်များ filter ခေါင်းစဉ်များ
Accaparement des terres et concentration des terres en Europe
Les jeunes agriculteurs européens devront faire face à davantage d'obstacles pour rentrer dans l'agriculture, car la terre est consolidée rapidement dans relativement peu de grandes exploitations. La terre est encore plus inégalement répartie que la richesse. Une forte baisse des petites fermes européennes est en cours avec des conséquences néfastes pour la sécurité alimentaire, l’emploi et le développement.
web_landgrabbing_fr_a5.pdf(pdf, 684.12 KB)
Legal tensions are growing within the international drug control regime as increasing numbers of member states move towards or seriously consider legal regulation of the cannabis market for non-medical purposes. Amongst reform options not requiring consensus, inter se modification appears to be the most ‘elegant’ approach and one that providesauseful safety valve for collective action to adjustatreaty regime arguably frozen in time.
Balancing Treaty Stability and Change(pdf, 3.89 MB)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အကျပ်အတည်း
တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခရေးရာနှင် ဒုက္ခသည်ရွှေ့ ပြောင်းမှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံဧ။်နယ်စပ်ဒေသတစ်လွှားတွင် နေရာယူဆဲဖြစ်သောကြောင့် လက်ရှိအနေအထားတွင် တိုင်းပြည်သည် လမ်းဆတွုံင်တည်ရှိနေသည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်သည့်
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလနောက်ပိုင်း ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၌ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်နိုင် စေရန်ကြိုးပမ်းသည့် စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ရာအကောင်းဆုံး တာထွက်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ကြိုဆိုဂုဏ်ပြု ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လည်း ကျဆုံးသွားမည်ကို စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်သည့် အငွေ့အသက်များက နိုင်ငံ၏ အတိတ် ကာလဖြစ်ရပ် ဆိုးများကို ပြန်ပြောင်းအမှတ်ရစေလျက်ရှိသည်။
ပင်လုံအလွန် - မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အကျပ်အတည်း(pdf, 1.4 MB)
Beyond Panglong: Myanmar's National Peace and Reform(pdf, 1.35 MB)
ပြန်လည်ထိန်းချုပ်စီမံပိုင်ခွင့် - မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာ စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူများနှင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ၏ သဘောဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်ခြင်း၊ ပြန်လည်အပ်နှံပေးခြင်းနှင့် မြေယာဆိုင်ရာရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ
ပြန်လည်ထိန်းချုပ်စီမံပိုင်ခွင့် - မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာ စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူများနှင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ၏ သဘောဆန(pdf, 2.75 MB)